Nkwuputa na nwebisiinka | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Akụkọ transgender nke Dr. Quentin Van Meter
Ndi nne na nna kparita uka banyere ulo akwukwo ndi nwere nchedo nwanyi
Ihe Ntughari Ntughari Transgender Site Ndi Detitionition
Dianne Colbert Video setịpụrụ na Nkuzi Schoolslọ Akwụkwọ Nchekwa
Ndi dibia, Ex transgenders na Social Commentators Kwurita echiche transgender Ideologies
Prọfesọ John Whitehall si 12 Video setịpụrụ na Gender Gys Dysphoria
ỌR R niile
Edemede ọkachamara na Okwu Transgender
Prọfesọ John Whithall Ọkachamara ọkachamara na Gys Dysphoria
Walt Heyer - Mgbanwe nke Transgender
AKWCHKWỌ AKWCHKWỌ AKWFKWỌ
AK SKỌ AH SB SR S AKW SKWỌ NSỌ niile
Ihe Nkụzi Ụlọ Akwụkwọ Nchekwa
Ndị nne na nna na-ekwu maka Mmemme Mmekọ nwoke na nwanyị nchekwa
Ozi banyere ihe kpatara ya
Gbasara Anyị - Ebumnuche Anyị
Mee ka m mara
Ndị nne na nna - ikike anyị.
CAUSE Video Na Ụlọ akwụkwọ Ụlọ Nche
Amụma nzuzo. Okwu & Ọnọdụ
Ngọnarị & nwebisiinka
Nabata na weebụsaịtị anyị. Ọ bụrụ n'ịnọgide na-achọgharị ma jiri weebụsaịtị a, ị na-ekwenye na ịnabata ya ma onye na-eso ya ga-edobe gị, yana usoro anyị na ojiji anyị.
Ozi dị na webụsaịtị a bụ maka ebumnuche ozi gbasara naanị yana ọ bụ site na ya nkwụsịsa. Ọ bụ ezie na anyị na-agba mbọ ịdebe ozi a ka ọhụhụ ma zie ezi, anyị anaghị enwe ihe nnọchite ma ọ bụ nkwa ọ bụla, kọwapụta ma ọ bụ nke a na-ekwu banyere oke, izu oke, ntụkwasị obi, nkwekọ ma ọ bụ nnweta dabere na weebụsaịtị ma ọ bụ ozi, ngwaahịa, ọrụ , ma ọ bụ ihe osise ndị metụtara saịtị ahụ maka ebumnuche ọ bụla. Ọ bụla ị tụkwasịrị obi na ozi ndị dị na ya doro anya na ị ga-emerịrị ihe egwu. Ikwesiri ime nyocha onwe gi iji mara ma ihe omuma a ma obu ahia ndi kwesiri ekwesi.
Webụsaịtị a nwere ebe ntụgharị asụsụ. Onweghị ọrụ dịịrị maka izi ezi nke ntụgharị ọ bụla.
Na ọ dịghị ihe omume ndị anyị ga-atụba maka ọ bụla ọnwụ ma ọ bụ mmebi gụnyere enweghị mmachi, anọ ma ọ bụ ndị dị na ọnwụ ma ọ bụ mmebi, ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọnwụ ma ọ bụ mmebi bụla ịda site ọnwụ nke data ma ọ bụ uru ịda si, ma ọ bụ na njikọ na nke ahụ, iji nke a website .
Site na weebụsaịtị a ị nwere ike ijikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ na - adịghị n'okpuru nkwụsịsa. Anyị enweghị ike ịchịkwa ọdịdị, ọdịnaya na ụdị nke weebụsaịtị ndị ahụ. Ntinye nke njikọ ọ bụla apụtachaghị nkwanye ma ọ bụ kwadoro echiche ndị akọwapụtara n'ime ha.
A na-eme mgbalị niile iji mee ka weebụsaịtị wee na-aga nke ọma. Kaosinadị, nkwụsịsa anaghị eburu ọrụ ọ bụla maka, ọ gaghị enwe ike ịta ụta maka weebụsaịtị ahụ anaghị adịte aka n'ihi nsogbu teknụzụ karịrị ike anyị.
Weebụsaịtị a yana ihe ndị dị n’ime ya bụ ikike nwebisiinka CUSE (Nchikota megide Mmụta Mmekọahụ Na-adịghị Nsogbu) - © 2018. Ikike niile echekwabara.
A machibidoro itinye ma ọ bụ imepụtaghachi akụkụ nke ma ọ bụ ọdịnaya niile n'ụdị ọ bụla karịa ndị a. May nwere ike bipụta ma ọ bụ budata ọdịnaya diski mpaghara gị naanị maka ojiji nkeonwe gị yana nke azụmahịa. May nwere ike idetuo ụfọdụ extracts naanị na ndị ọzọ maka maka ha, mana naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyere na ebe nrụọrụ weebụ dị ka isi okwu ahụ.
Nwere ike ịgaghị, belụsọ na anyị edepụtara ederede edepụtara, kesaa ma ọ bụ jiri ọdịnaya na-azụ ahịa. May gaghị ebugharị ya ma ọ bụ chekwaa ya na weebụsaịtị ma ọ bụ ụdị ọzọ nke sistemụ elektrọnik.
Ihe Google tụgharịrị na saịtị ntanetị mepụtara ntụgharị igwe sitere na igwe na - edobeghi na sistemụ anyị. Informa, ndị ọrụ anyị, na ndị nyere anyị ikike emeghị ihe ngosi ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ ikike ọ bụla maka izu oke, izu ezu, ma ọ bụ kwe ekwenye maka ebumnuche nsụgharị ahụ. Agaghị enwe ụgwọ maka mmefu ọ bụla, ihe omume, nkwupụta, usoro ikpe, ihe achọrọ, ụgwọ ọrụ, mmebi iwu, na ụgwọ ndị ọzọ n'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara na-ebilite ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-esoghị, n'ihe metụtara ma ọ bụ site na ojiji nke ntụgharị ahụ. . Ojiji iji atụmatụ a dabere na Usoro ndị a.
Usoro Nchigharị: Ezigbo ndị mmadụ, Akụkọ n'ezie
Mmekọahụ nke Mmekọahụ na-agbanwe
Kedụ ka “mma” si dị Ọfụma n’ụlọ akwụkwọ?
Arịrịọ maka nyocha ndị omebe iwu na Transgenderism: Prọfesọ John Whitehall.
Copyright © 2021 Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)